Huawei Wearables dia ho afaka mametraka rindranasa amin'ireo mpamorona hafa | Androidsis
Huawei dia naneho tato anatin'izay taona lasa izay fa mahay manamboatra finday mahafinaritra izy nefa koa, hainao koa ny manao smartwatches. Na izany aza, ny firaketana an-tsarimihetsika tsara teo amin'ny tsenan'ny telefaona dia nopetehin'ny sazy avy amin'ny governemanta amerikana fa tsy ny fizarana smartwatch.
Raha ny marina, nandritra ny telovolana farany tamin'ny taona 2020, dia niely i Huawei smartwatches mihoatra ny 10 tapitrisas. Ny ecosystem an'ny fampiharana ho an'ny famantaranandron'i Huawei dia voafetra ihany amin'ny fampiharana an'ny mpanamboatra azy manokana, fetra lehibe iray nanapahan'ny orinasa Aziatika hanafoana.
Misaotra an'izany, ireo mpandrindra fampiharana dia afaka mandefa ny fampiharana any LiteOS, ilay rafitra miasa ampiasain'ny famantaranandro Huawei. Hatreto, Huawei dia tsy namela ny fisian'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo mba hisorohana ny androm-piainany misy ny bateria tsy dia voakasik'ireo fampiharana tsy voafehin'izy ireo.
Ny Huawei voalohany azo tratran'ity fanapahan-kevitra ity dia ny Huawei GT 2 Pro, maodely izay efa manana ny fampiharana Fifity ampiasainy, fampiharana izay manolotra fiofanana 900 mahery. Raha te handefa fampiharana any LiteOS, ny mpampiasa dia tsy maintsy mampiasa kit fampandrosoana Huawei, kit izay efa nanomboka natokana ho an'ny vondrom-piarahamonin'ny developer.
Araka ny filazan'ny Huawei
Ny tanjon'i Huawei dia ny hanome fanampiana feno ho an'ireo mpanome atiny fampiharana rehetra, manarona ny tsingerina rehetra hatramin'ny famoronana, fampandrosoana ary fizarana hatramin'ny fandidiana sy ny fanadihadiana ny angona.
izany mitovy be amin'ny fizotry ny fampidirana anaty rindrambaiko izay nataon'ny orinasa sinoa hampiroborobo ny AppGalog sy ny tontolo iainana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Huawei Wearables dia afaka hametraka rindranasa amin'ireo mpamorona hafa
Oppo A54 5G: ny antsipiriany tafaporitsaka dia ahitana ny fakantsary quad Snapdragon 480 sy 48 MP
PUBG: Nambara ny fanjakana vaovao, ny sequel ho an'ny finday PUBG malaza ho avy amin'ity taona ity